Phupha ngenkalakahla Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Uphahla lomlomo lubizwa ngokuba yinkalakahla. Isebenza njengentsika yolwimi kwaye ke ibaluleke kakhulu xa usitya naxa uthetha. Xa kufikwa ekutyeni okutyayo, igama elithi "inkalakahla" lisoloko linxibelelene nengcinga yolonwabo, okuyinyani ngokukodwa kwiigourmet. Ngesidlo esimnandi sinokuyivuyisa inkalakahla yethu kwaye nathi ngokwethu.
Kodwa ngaba ukutolika kwamaphupha kulutolika njani uphawu "inkalakahla"? Kutheni yavela ephupheni lakho? Cinga kwakhona ngephupha lakho kwaye ulivumele liye engqondweni yakho. Ubone ntoni? Uziva njani? Ngaba kukho ezinye iinkcukacha ezongezelelweyo? Le mibuzo kufuneka ikuncede ekutolikeni amaphupha. Kuba ukutolikwa okunamandla kwephupha lakho, iinkcukacha zibalulekile.
Kuba inkalakahla iyinxalenye yomlomo kwaye ihlala inxulumene nokutya, iisimboli zamaphupha "umlomo," "incasa," kunye "nokuginya" kufuneka zisetyenziselwe ukutolikwa kwephupha.
1 Uphawu lwephupha «inkalakahla» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «inkalakahla» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «inkalakahla» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «inkalakahla» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko jikelele lwamaphupha, uphawu lwephupha "inkalakahla" lisetyenziswa njengomqondiso we ukutya kokomoya ijongiwe. Umphuphi unokuba nethuba lokufumana ulwazi olutsha okanye wandise ukukhanya kwakhe kokomoya, ngakumbi kwi el mundo yomlindo. Isimboli yephupha ikubonisa kwakhona ukuba ukulungele ngokwenene oku.
Ukuba iphupha liyangcamla ukutya kwakho ephupheni, kwaye uphawu lwephupha "inkalakahla" linxulunyaniswa neemvakalelo ezimnandi, ke ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha, ukutya kokomoya komphefumlo okubonwayo kwihlabathi lokuvuka nako kuyavumelana incasa yokulala. Ufumana kuye amathuba obomi amatshaongathanda ukuyisebenzisa okanye ukuvavanya.
Kwelinye icala, ayikuthandeki, uphawu lwephupha "inkalakahla" lubonisa ukuba oku kutya kokomoya akuhambelani Iinjongo kunye namaxabiso. Usenokuba uthathe isigqibo ngento entsha, kodwa ayihlangabezani nolindelo lwakho. Ke ngoko, umphuphi kufuneka acinge ngononophelo nokuba angathanda na ukulandela le ndlela ikhethiweyo kwihlabathi lokuvuka. Kungalixesha lokulungisa ikhondo lakho ngaphambili, kwimeko embi, ulahleke.
Uphawu lwephupha «inkalakahla» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwephupha kutolika uphawu lwephupha "inkalakahla" njenge Ukuphatha inkalakahla ephupheni, okumnandi kakhulu ephupheni.
Ukuba umphuphi uyayithanda into angayala kwilizwe elivukayo, ufumana uphawu lwephupha kunye nesicelo sokujonga ngakumbi okanye ukufumanisa. Mhlawumbi unento emangazayo ayigcinele wena, ukanti kuninzi anokukunika ephupheni.
Uphawu lwephupha «inkalakahla» - ukutolika kokomoya
Ukusuka kwindawo yokomoya, inkalakahla ifanekisela ukwamkelwa ephupheni. ulwazi lokomoya, ethatha iphupha eliqhubela phambili.